ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book для Андроид - скачать APK
главная страница » Приложения » Музыка и аудио » ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book
Скачать APK(16.8 MB)
Описание для ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book
တိုးတတ်မှုကို ရှာဖွေသူတိုင်းသည် စာအုပ်များစွာကို လေ့လာဖတ်ရှုရပါသည်။ သို့သော် စာဖတ်ချိန်ကို သေချာမပေးနိုင်၍ တိုးတတ်သင့်သလောက်မတိုးတတ်မှုများဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေနားဆင် သည် ထိုတိုးတတ်လိုသူများအတွက် ရသည့်အချိန်တွင် စာပေဗဟုသုတများကို လေ့လာနိုင်ရန် စာအုပ်များကို ပြန်လည်အသံသွင်းပြီး နားဆင်နိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။
ဘတ်စ်ကားစီးချိန်၊ ဘတ်စ်ကားစောင့်ချိန်၊ လမ်းလျှောက်ချိန် သို့မဟုတ် အားကစားလုပ်ချိန်၊ အိမ်အလုပ်လုပ်ချိန် စသည့် အချိန်များ တွင် ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ်များကို နားဆင်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ တိုးတတ်မှုများကို အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း မှုမရှိစေဘဲ သက်သာစွာ ရှာဖွေနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ရွှေနားဆင်တွင် စာရေးဆရာ/မ များ၏ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးသောစာအုပ်များကိုသာ အသံသွင်းစာအုပ်များ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ရွှေနားဆင်တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ဝတ္ထုတို /ရှည် ၊ စီးပွားရေးပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များ ၊ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ သရဲသစ္ဆေ ဝတ္ထုများ ၊ လျှို့ဝှက်သည်းဖို စုံထောက်ဝတ္ထုများ ၊ အချစ်၊ ဟာသ အစရှိသော စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
MPT ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တိုးတတျမှုကို ရှာဖှသေူတိုငျးသညျ စာအုပျမြားစှာကို လလေ့ာဖတျရှုရပါသညျ။ သို့သျော စာဖတျခြိနျကို သခြောမပေးနိုငျ၍ တိုးတတျသငျ့သလောကျမတိုးတတျမှုမြားဖွဈလာတတျပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့ ရှနေားဆငျ သညျ ထိုတိုးတတျလိုသူမြားအတှကျ ရသညျ့အခြိနျတှငျ စာပဗေဟုသုတမြားကို လလေ့ာနိုငျရနျ စာအုပျမြားကို ပွနျလညျအသံသှငျးပွီး နားဆငျနိုငျအောငျ ဝနျဆောငျမှုပေးထားပါသညျ။
ဘတျဈကားစီးခြိနျ၊ ဘတျဈကားစောငျ့ခြိနျ၊ လမျးလြှောကျခြိနျ သို့မဟုတျ အားကစားလုပျခြိနျ၊ အိမျအလုပျလုပျခြိနျ စသညျ့ အခြိနျမြား တှငျ ရှနေားဆငျ အသံသှငျးစာအုပျမြားကို နားဆငျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ၏ တိုးတတျမှုမြားကို အခြိနျကုနျ လူပငျပနျး မှုမရှိစဘေဲ သကျသာစှာ ရှာဖှနေိုငျပွီဖွဈပါသညျ။
ရှနေားဆငျတှငျ စာရေးဆရာ/မ မြား၏ ခှငျ့ပွုခကျြရပွီးသောစာအုပျမြားကိုသာ အသံသှငျးစာအုပျမြား ပွုလုပျထားပါသညျ။
ရှနေားဆငျတှငျ ပညာရေးဆိုငျရာ စာအုပျမြား၊ ဝတ်ထုတို /ရှညျ ၊ စီးပှားရေးပညာဆိုငျရာစာအုပျမြား ၊ ခွောကျခွားဖှယျရာ သရဲသစ်ဆေ ဝတ်ထုမြား ၊ လြှို့ဝှကျသညျးဖို စုံထောကျဝတ်ထုမြား ၊ အခဈြ၊ ဟာသ အစရှိသော စာအုပျပေါငျးမြားစှာကို နားဆငျနိုငျပါပွီ။
MPT ဖုနျးနံပါတျမြားဖွငျ့သာ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
Everyone wants to read books for their own success, knowledge, entertainment and etc...
But most people complain they do not have time to read.
We, Shwe Nar Sin created Audiobooks for those people and who have trouble to read books.
As we have various kind of books categories, you can easily choose over the genres that you really want to listen to.
You can listen to Shwe Nar Sin Audiobooks while you're commuting, workout, housework and
even in bedtime. Also, you can listen to Free Audiobooks and Subscription Audiobooks by Downloading or Streaming.
Downloaded Audiobooks can listen anytime anywhere without using internet data and until
You can subscribe Audiobooks with MPT SIM card but free audiobooks can listen with
any kind of Telecom SIM card.
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book Tags
Категория: Бесплатно Музыка и аудио Приложение
Дата публикации: 2020-10-29
Uploaded by: Orlando Mendez
V1.0.7 16.8 MB APK
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book 1.0.7 (8)
Файл SHA1-хэша: 0e833bda2186f5f48d1e8d8671444db1584cef81
V1.0.6 15.2 MB APK
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book 1.0.6 (7)
Uploaded by: عبود الاسمرأني
Файл SHA1-хэша: acf4d9ed45403512b5bda6605637abd28d7482cd
Размер файла: 15.2 MB
V1.0.5 15.1 MB APK
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book 1.0.5 (6)
Файл SHA1-хэша: d11ceaf9967385122da86452dceb10bf16421ad9
V1.0.4 15.1 MB APK
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book 1.0.4 (5)
Uploaded by: Faizal Abraham Faizy
Файл SHA1-хэша: e15285e757332f1f7194f3b70ebecce664545e2a
Похоже на: ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ် - Shwe Nar Sin Audio Book
Ещё от Bagan Innovation Technology
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha Baydin
ရသအိမ် စာစုများ - Ya Tha Eain
Mizzima Daily Newspaper
My Cykel - ဆိုင်ကယ်ဝယ်မယ်